बुढ्यौलीमा मात्र हुन्न मोतियाविन्दुको जोखिम -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन २७, २०७७ समय: २०:२०:१४
सामान्यत बुढ्यौली उमेरमा देखिने समस्या हो, मोतियाविन्दु । खासगरी ५० बर्ष उमेर पार गरिसकेपछि यस्तो समस्या देखापर्न सक्छ । हुन त मोतियाविन्दुको एकमात्र कारण बुढ्यौली होइन । चिकित्सकहरुका अनुसार अन्य कारणले पनि मोतियाविन्दु हुनेगर्छ । कसैमा जन्मजात त कसैमा आँखाको चोटपटकले मोतियाविन्दु हुनसक्छ ।
आँखाले रंगहरु फिका देख्छ । धमिलो देख्छ । प्रकाशको आसपासमा गोलो घेरा देख्छ । चहकिलो उज्यालोमा पनि हेर्न नसकिने, राती पनि दृष्टि कमजोर हुने । ठीक यहि अवस्थालाई मोतीबिन्दु भएको भनिन्छ ।
मोतिबिन्दु भएपछि के हुन्छ ? स्वभाविक रुपमा हाम्रो दिनचर्या प्रभावित हुन्छ । आँखाको दृष्टि कजोर भएपछि सामान्य कामकाजमा कठिनाई आउँछ । हामी भने जसरी र चाहे जसरी काम गर्न असमर्थ हुन्छौं । आँखाको नानी वरिपरि देखिने सेतो बादल वा सेतो धब्बा नै मोतियाविन्दु हो । तर, जब आँखामा प्रोटिन एकै ठाउँमा जम्मा भएर बस्छ, तब आँखामा सेतो बादल लाग्ने गर्छ । आँखामा सेतो बादल लागेमा लेन्सले रेटिनामा स्पष्ट चित्र पठाउन सक्दैन । मोतियाविन्दु एउटा आँखा वा दुवै आँखामा एकपटक हुनसक्छ । तथापी, मोतियाविन्दुको समस्या दुवै आँखामा एकैपटक हुने सम्भावना न्युन हुने ।
मोतियाविन्दु भएमा आँखाको दृष्टि क्रमस धमिलो हुँदै जान्छ । आँखा दुख्ने, चिलाउने, बिझाउने, स्पष्ट नदेख्ने, पोल्ने जस्ता समस्या भने फरक रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । मोतियाविन्दुको स्पष्ट संकेत भनेको टाढाका बस्तु हेर्दा बादल लागे जस्तै हुन्छ । यसको समयमै उपचार भएन भने आँखाको दृष्टि गुम्न सक्ने बताइन्छ ।
मोतियाविन्दु हुनुको कारण ?
–लामो समयसम्म स्टेरायड तथा अन्य औषधिको प्रयोग
–मधुमेह लगायतका रोग लागेमा
–घाममा धेरै हेरेमा
–आँखाको शल्यक्रिया गरेमा
–लामो समयसम्म आँखाको समस्या भएमा
मोतियाविन्दुको विभिन्न प्रकार हुन्छ । यो आँखामा कसरी विकसित हुन्छ, त्यसमा निर्भर गर्छ । न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक मोतियाविन्दु उमेरसँग सम्बन्धित मोेतियाविन्दु हो । आँखाको लेन्स कडा भएमा तथा पहेलो भएमा यस प्रकारको मोतियाविन्दु हुने गर्छ । जति जति यो समस्या बढ्दै जान्छ, आँखाका हेर्ने क्षमतामा कमजोर हुँदै जान्छ । यो मोतियाविन्दु भएमा आँखाको नानी पहेलो वा खैरो हुने गर्छ ।
जन्मजात मोतियाविन्दु अरु मोतियाविन्दुको तुलनामा कम हुन्छ । माध्यामिक मोतियाविन्दु रोग तथा औषधीका कारण हुन्छ । जसमा ग्लूकोमा तथा मधुमेह प्रमुख हुन् । अन्य रोगका कारण पनि कहिलेकाहीँ मोतियाविन्दु हुनसक्छ ।
आँखा सम्बन्धि चोटका कारण पनि मोतियाविन्दु हुनसक्छ । तर चोटपटकका कारण मोतियाविन्दु हुनमा धेरै समय लाग्छ ।
–सूर्यको हानीकारक विकिरणले असर गरेमा
–अत्याधिक मदिराको सेवन
–हानिकारक विकिरणको असर
मोतियाविन्दुको रोकथामका उपाय
–घाममा निस्कदा चश्माको प्रयोग गर्ने । यसले घामका हानीकारक विकिरणबाट आँखालाई सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
–नियमित रुपमा आँखाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने
–एन्टीअक्सिडेन्टयुक्त फलफुल तथा तरकारीकोे सेवन गर्ने
–वजन नियन्त्रित गर्ने
–मधुमेह नियन्त्रण गर्ने
यदि मोतिबिन्दु भइसकेको अवस्थामा उपचारको केहि विकल्प अपनाउन सकिन्छ । सामान्य अवस्थामा चस्मा लगाएर पनि यसमा सुधार हुन्छ । कतिपय अवस्थामा भने आँखाको लेन्सको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ ।